किताब झोलामा बोकेर बाँड्दै हिड्थें । - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
किताब झोलामा बोकेर बाँड्दै हिड्थें ।
सुबिन भट्टराई ३१, खोटाङमा जन्मिएर राजधानीमा संघर्ष गर्दै चिनिएका व्यक्ति हुन् । कथाकी पात्र कथासंग्रहबाट साहित्य जगतमा चिनिएका सुविन समरलभबाट सेलिब्रेटि भए । लेखेरै बाँच्न सक्ने अवस्था बनाइसकेका सुविन इन्भाइरोमेन्ट साइन्सका विद्यार्थी हुन् । मिलनसार स्वभावका सुविनसँग जिष्टखबरको भलाकुसारी ः
१.तपाईको बुझाइमा साहित्य के हो ?
मानिसमा भएको अन्तरंग कुरालाई शब्दको माध्यमबाट जुनसुकै भाषामा प्रस्तुत गरिने प्रष्फुटित शैली ।
२.साइन्सको विद्यार्थी अझ कलेजमा पढाउनु पनि हुन्छ कसरी तारतम्य मिल्छ विज्ञान र साहित्यको ?
मिल्दो रहेछ, किनकी मानिसभित्र एउटा प्रतिभा हुन्छ र बाहिर करकापले अर्को विषय चुन्दो रहेछ । यदि मानिस भित्र प्रतिभा छ भने जसरी पनि बाहिर निस्कन्छ ।
३.लेखनतिर कसरी तानिनु भयो ?
पहिलेदेखि नै कविता लेख्ने र पढ्ने काम गर्थें । वि.पि.कोइरालाका पुस्तकहरू पढ्न थालेपछि लेख्नुपर्छ भन्ने लागेर उपन्यासको खेस्रा कोरें । ५०–६० पेज पुगेको लेख पनि च्यातें र कथाहरू लेख्दै गएँ, १० वर्षको अन्तरालमा कथाकी पात्र कथासंग्रह निस्कियो ।
४.पहिलेको र अहिलेको साहित्य बजारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मेरो पहिलो पुस्तक ‘कथाकी पात्र’ को कुरा गर्ने हो भने छापिएको पुस्तक नबिकेर म आफैं झोलामा किताब बोकेर बाड्दै हिड्थें । अहिले पाठक बढेका छन् । पाठकहरूले पुस्तक खोजी खोजी पढ्ने क्रम बढेको छ । समर लभसम्म आइपुग्दा पुस्तकको माग ह्वात्तै बढेको छ ।
५.समरलभ कसरी लेखियो ?
वि.पि.कोइरालाका लेखहरूबाट पढ्न सुरू गरें । मलाई लाग्छ उनी जस्ता सरल र मनोवैज्ञानिक लेखक सायदै कम छन् । अझ नेपालमा किशोर तथा युवा पुस्तालाई साहित्यतिर तान्न सक्ने पुस्तक सायद कम छन् । त्यसैले मलाई लाग्थ्यो, चेतन भगत पुस्तकले गहन निकोलस स्पार्कस जस्ता लेखकका सरल लेखन शैली भएका पुस्तकले गहन पुस्तक पढ्नतिर डो¥याउँछ । यसरी नै टिनएजरको कथालाई उनीहरूकै भाषामा प्रस्तुत गरें ।
६.युवाकै कुरा लेख्नुको कारण चाहीँ ?
मलाई लाग्छ नेपालका युवापुस्ता भड्किएका छन् । उनीहरूलाई खासबाँध्ने कुरा निकै कम छन् । त्यसैले युवालाई चाँडै नै साहित्यतिर तान्ने हो भने उनीहरू नै नियमित र निरन्तरका पाठक बन्न सक्छन् ।
७.समर लभपछि धेरै किस्साहरू सुनिए नि ?
अधिकांश सत्य हुन् । कसैलाई तीन दिनसम्म ह्याङ भयो, कोही रातभरी सुतिनँ, उपत्यका बाहिरका पाठकहरू काठमाडौं आएर टि.यू. घुमेर गएँ भन्ने कुरासम्म सुनें । अझ कतिले त अतित र सायाको खुब खोजी गरे । प्रेममा परेका अधिकांश पाठकहरू यसको फ्यान भए । धेरै जोडीको बिग्रन लागेको सम्बन्ध पनि जोडियो भन्ने सुनें । केहीले अतित र सायाको नाममा फेसबुक एकाउण्ट पनि खोले, समग्रमा फरकफरक प्रतिक्रिया पाएको छु ।
८.साहित्य आफैंमा ग्ल्यामर बढि भएको हो ?
साहित्यमा ग्ल्यामर हो । यहाँ चलचित्रमा नायिकाले तिघ्रा देखाउनुलाई ग्ल्यामर बुझिन्छ । तर ग्ल्यामर भनेको त्यसको आकर्षण र विषयवस्तुलाई भनिन्छ । पहिलेको तुलनामा ग्ल्यामर बढ्दो छ र यो सकारात्मक हो ।
७.पाठकहरू सुविनको नयाँ पुस्तकको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् नि ?
धेरैले समर लभको सिक्वेल खोज्नु भयो र यो पनि भदौसम्म बजारमा आइसक्छ र म कथाकी पात्रभित्र औडाहा शिर्षकको कथालाई फिल्मको स्क्रिष्टको लागि तयारी गर्दैछु । समरलभको कथामा फिल्म बन्ने कुरा पनि चल्दैछ ।
८.धेरैलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भयो तर आफु चाहीँ ?
म अहिले सिंगल नै छु । बिहेका लागि लगन नजुरेको भन्नुपर्ला । जुरेपछि सबैले खबर पाउनुहुनेछ ।